sputtering ပစ်မှတ် detitanium agent ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြပါ
ပစ်မှတ်ပစ္စည်းသည်အသုံးချမှုကျယ်ပြန့်ပြီးစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကျယ်ဝန်းသည်. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်, detitanium agent နှင့် PVD coating ၏လက္ခဏာများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအဖြေ.
Due to its non-toxic and environmentally friendly characteristics, detitanium agent သည် electroplating အကာအကွယ်သုတ်နှင့်အောက်ခံကိုဘယ်တော့မှပျက်စီးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, IP အလွှာကိုလျင်မြန်စွာအခွံခွာပါ, အရောင်ခွဲခြာအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းရှိသောကြောင့်၎င်းကို Ti နှင့်အိုင်းယွန်းအလှဆင်လုပ်ငန်းအဖြစ်အဓိကထားသည်, ယုံကြည်ပါ, TiCN, Ti + SS, မင်း + Cr, Zr, ZrCN, TiALN, ZrALN, plasma coating de-filming ပါသောထုတ်ကုန်အသစ်များ.
In terms of electro-color separation in the ion decorative plating room, အစဉ်အလာရုပ်ရှင်ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများတွင်ပြင်းထန်သောအက်ဆစ်များနှင့်အယ်ကာလီများသုံးထားသောကြောင့်, သူတို့သည် electroplating အကာအကွယ်သုတ်ဆေးကိုပိုမိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်, ၎င်းသည်အကာအကွယ်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ခွေးသွားများဖောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်, အရောင်ခွဲခြားပြီးနောက်ချို့ယွင်းချက်များစွာဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်သံမဏိအောက်ခြေအလွှာများနှင့်အလွှာအားလုံးအတွက်သင့်တော်သည်, ကြေးနီ, အလွိုင်း, PNP, PCP, နီကယ်, စသည်တို့. ပြန့်ကျဲနေသောပစ်မှတ်ပစ္စည်းသည်ရုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိသည် 1-2 မိနစ်များ, အဆိပ်အတောက်မပါပါ, အနံ့အသက်, အရောင်မဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသည်, အောက်ဆုံးအလွှာကိုမပျက်စီးစေပါဘူး. အင်္ဂါရပ်များ, အထူးသဖြင့် PNP ရှိ IP coating ပြီးနောက်, PCP, သံမဏိအလွှာများအငြိမ်းစားယူသည်, ၎င်းကိုမီးဖိုထဲသို့တိုက်ရိုက်သန့်စင်နိုင်သည်, ထို့နောက် IP coating တင်သည်, ပေါင်းစပ်မှုသည်ကောင်းသည်, အောက်ဆုံးအလွှာကိုပြန်လည်ဓာတ်ဖြည့်ရန်ဓာတုပစ္စည်းမလိုပါ.
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့်လေဟာနယ်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ (4ဆး